Yali 2017 : mitantara ny traikefa azony Rakotonjanahary Fidèle | NewsMada
Yali 2017 : mitantara ny traikefa azony Rakotonjanahary Fidèle
Tsy misy mafy tsy laitran’ny zoto. Izay raha fintinina ny dingana nosedrain-dRakotonjanahary Fidèle, ka nahazoany ny vatsim-pianarana ao anatin’ny fandaharanasa Yali ary nianarany momba ny fahaiza-mitarika tany Etazonia. Mitantara ny traikefa azony izy.
Gazety taratra (*) : Afaka lazainao amin’ny mpamaky ve ny mombamomba anao?
Rakotonjanahary Fidèle (-) : Rakotonjanahary Fidèle no anarako, 32 taona, manambady, manan-janaka ary mpikaroka ao amin’ny Institut à l’ethique et science marine (IHSM) ao Toliara. Eo am-panomanana ny “doctorat” ny tenako ankehitriny. Mpikambana ao anatin’ny Young research organization of Madagascar (Yso-Madagascar) aho, izay mikirakira ny tontolon’ny ranomasina sy izay azo trandrahina rehetra ao aminy.
* Tantarao fohy ny nahatonga anao ho anisan’ny tsara vintana nahazo ny vatsim-pianarana amin’ny fandaharanasa Yali.
– Efa naniry mafy ny hahazo an’io vatsim-pianarana io aho tamin’ny taona 2016. Tena vonona tamin’ izany saingy tsy nahay teny anglisy. Tsy nihemotra anefa fa niezaka nianatra teny anglisy, nampiana-tena, nitrandraka… Tonga ny septambra 2016, nisokatra ny fisoratana anarana ary nisy ny fanentanana ho an’ny tanora manana fandaharanasa tsara handray anjara. Nisoratra anarana avy hatrany aho satria manana fandaharanasa mikasika ny tontolon’ny ranomasina aho izay hanaovako fikarohana rahateo.
Tonga ny volana janoary 2017, nivoaka ny lisitr’ireo tanora voafantina. Tafiditra tao anatin’ireo 160 voafantina ny anarako dia tena faly be mihitsy tamin’izany. Nanomana ny “interview” satria izay indray no dingana hiakarana amin’ny fifantenanan manaraka. Natao ny “interview” teto Antananarivo ary volana febroary dia efa nivaly ka anisan’ny tao anaty lisitra ihany ny tenako. Teo dia fantatra fa anisan’ny nahazo ny vatsim-pianarana hiofana any Etazonia momba ny fahaiza-mitarika ny tena.
* Nanahoana ny fiatrehana ny fiofanana?
– Lalam-piofanana momba ny Civic leadership no niofanako tany izay mifandraika tanteraka amin’ny fanitarako ny fikarohana hataoko sy ny fandaharanasa efa natomboka. Tany amin’ ny oniversite Delaware, tao Etazonia, aho no niofana. Betsaka ny traikefa azo. Nahay ny fomba fiainan’ny Amerikanina, nahafantatra ny tokony hatao hahafahana mampiroborobo ny fikambanana mpanao asa soa ireny. Nianatra momba ny fahaizana miresaka imasom-bahoaka. Nianatra ny fomba fandresen-dahatra. Teo koa ny fomba fitadiavana loharanom-bola hahafahana manatsara ny tetikasa…. Ankoatra izany, nitsidika foibe fitaizana olona marefo toy ny zokiolona, olona manana fahasembanana… Nahafinaritra ny fifampizarana teo amin’ ny Malagasy sy ny fianakaviana amerikanina izay nandray ny tena tany. Nahazo namana betsaka aho avy any toy ireo tanora afrikanina sy amerikanina marobe.
* Tafaverina an-tanindrazana ianao, inona ny fampiharana ny traikefa azo?
– Tena betsaka ny hevitra ato an-doha amin’izao fotoana izao. Fa ny azo ampiharina avy hatrany dia ny fitetezana ny sekolim-panjakana any Toliara, hampahafantarana ny ankizy ny tontolon’ny ranomasina. Hanairana ny sain’ny ankizy sahady ho liana amin’ny fitrandrahana rehetra azo hatao ao anatin’io ranomasina io no tanjona amin’izany. Ezahina hiitatra amin’ny faritra hafa io fampahafantarana io ao anatin’ny roa taona.
Faniriana lavitr’ezaka indray ny hanangana toerana manokana hampahafantarana ny tontolon’ny ranomasina. Natao indrindra ho an’ireo mpizahatany sy ny mpivahiny mpiala sasatra tonga mitsidika any Toliara io toerana io. Hanatona ny USAID izahay amin’ny fanatanterahana izany satria efa nanaiky ny hanampy izy ireo, raha maharesy lahatra ny fandaharanasa hataonay.
* Hafatrao ho an’ny tanora?
– Tena nofinofin’ny tanora izany ho any Etazonia izany. Azo atao ary mila manao dingana anefa fa tsy ajanona ho nofy fotsiny. Rehefa misy zavatra eritreretin’ny saina, tsy mila miandriandry fa avy hatrany dia hatomboka. Manofinofisa zavatra goavana. Atombohy ny fanatanterahana azy fa mihamatanjaka ianao amin’ny fanatanterahana izany ary mila sahy ihany koa manao zavatra.
Tolona ny fiainana ary mila mahatratra ny fanamby apetraka. Mikarokaroka, sahy manontany ary sahy manomboka. Ireo ihany dia efa ampy hanombohana zavatra ary tohizana hatrany ka lasa tanteraka izany avy eo.
Efa misokatra ny fisoratana anarana ho an’ny Yali manaraka. Manentana ny tanora 25 ka hatramin’ny 35 taona handray anjara. Vitanao io rehefa hatombokao.
Nangonin’i Tatiana A